အတိတ် – Grab Love Story
ထန်းတောရှေ့မှ ဖြတ်သွားသော ကျောင်းဆရာလေး တင့်ဆွေကို ရွာမှကာလသားခေါင်းကိုချက်ကြီးက နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဆရာလေးကား သဘောကောင်းသည်၊ စာသင်ပြလည်းကောင်းသည်။
ဒါပေမဲ့ ဆရာလေးအကြောင်းကိုတော့ချက်ကြီးမသိ။ (၄)တန်းနှင့်ကျောင်းထွက်ခဲ့သော ချက်ကြီးအဖို့ သူနှင့် ရွယ်တူဖြစ်သော ဆရာလေးလို ပညာတတ်တစ်ယောက်ကို မိတ်ဆွေ ဖြစ်ခွင့်ရသည့်အတွက် တော်တော်ဝမ်းသာနေသည်။ ဆရာလေးကား ကိုချက်ကြီးရှိရာဆီသို့လာခဲ့သည်။
ထန်းတောပိုင်ရှင် ဦးမောင်ငယ်မိန်းမ ဒေါ်အေးမိက ထန်းရေအိုးတစ်အိုးကို မြက်ဖျာပေါ်သို့ လာချလိုက်သည်။
“ခွက်လေး ဘာလေးရော အမြည်းရော ဒေါ်အေးမိ”
“ဟိုမှာ နင့်ကိုမောင်ငယ်ယူလာပါပြီ.. လယ်ကြွက်ကင်ကို ကြော်ပေးနေတယ်.. အခုတော့ ပဲလှော်နဲ့ဘဲ အရင်မြည်းဦး…အားနာလိုက်တာ ဆရာလေးရယ်.”
ဒေါ်အေးမိက ဆရာလေးကိုတင့်ဆွေကို လောကွက်ပြုလိုက်သည်။
ဆရာလေးတင့်ဆွေက ထန်းရေအိုးထဲသို့ ခွက်ဖြင့်ခပ်ကာ ထန်းရေတစ်ခွက်ကိုမော့ချလိုက်သည်။
ထိုအချိန်မှာဘဲ လယ်ကြွက်ကြော်ပန်းကန်ကို ကိုမောင်ငယ်မှ လာချလိုက်သည်။
ကိုမောင်ငယ်ကား ဆရာလေးကိုတင့်ဆွေကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကိုမောင်ငယ်ကား ဆရာလေးကိုတင့်ဆွေနှင့် ချက်ကြီးတို့နားကို ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။ သူ့အနေနှင့် ဆရာလေးကိုတင့်ဆွေနှင့်စကားပြောရတာကို သဘောကျသည်။ ဆရာလေးက ဗဟုသုတလည်း ပြည့်စုံတယ်လေ။ ဆရာလေးက ဒီရွာကိုရောက်တာ (၁)နှစ်လောက်ဘဲရှိသေးတယ်။ ရွာကလူတွေနဲ့က တော်တော်ခင်နေသလို စာအသင်အပြကောင်းသဖြင့် ကလေးတွေကချစ်ကြသည်။ ရွာကလူတွေ၊ ကလေးတွေနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပေမဲ့.. ဆရာလေးအကြောင်းကို ဘယ်သူမှ ကောင်းကောင်းမသိကြ။ မြို့ကလာတာလို့ဘဲ သိရသည်။ ဒီနေရာနှင့်တော်တော်ဝေးသော မြို့ကြီးတစ်မြို့က။
ဒီရွာကလေးက အညာဘက်မှာ ဆရာလေး လာသောဘက်က အဝေးကြီးက မြို့တစ်မြို့မှ။ ဆရာလေးကို သူ့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း မေးကြည့်တိုင်း ဆရာလေးက စကားလမ်းကြောင်း လွဲလေ့ရှိသည်။ ဆရာလေးပြောပြသော ဗဟုသုတများ စာပေ ရသများကို နားထောင်ရင်း.. ကိုမောင်ငယ်တို့ ဇနီးမောင်နှံချက်ကြီးတို့မှာ ဆရာလေးရဲ့ စကားပြောကောင်းမှုကို ချီးမွမ်းမိသည်။ ကိုမောင်ငယ်က ဆရာလေးတင့်ဆွေကို..
“ဒါဆို တော်တော်ငယ်သေးတာဘဲ.. ဆရာလေးတို့များ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ထက် ဗဟုသုတလဲပြည့်စုံ ဥာဏ်ပညာကလဲ ပြောစရာမရှိအောင်ဘဲ..”
“ဒါနဲ့ဆရာလေး မိန်းမယူဖို့ စိတ်မကူးသေးဘူးလား..”
“ဆရာလေးကိုရွာထဲမှာ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေမှအများကြီး.. ကျွန်တော်တောင် မနာလိုဖြစ်တယ်..ဟီးဟီး..”
“ဟုတ်သားဘဲ…ချစ်ကြီးရယ်…နင်စဉ်းစဉ်းစားစားလဲ ပြောပါဦး.. ဒို့ဆရာလေးက လူကလည်းချော.. ပညာကလည်းတတ်… ဒို့ရွာကကောင်မလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားမတဲ့လား… မြို့က ကောင်မလေးချောချောလေးတွေဘဲ စိတ်ဝင်စားမှာပေါ့..”
“ဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူး…ဒေါ်အေးမိရယ်.. တောက ကောင်မလေးတွေက မြို့ကကောင်မလေးတွေနဲ့စာရင် ရိုးသားဖြူစင်ပါတယ်..”
ဆရာလေးကိုတင့်ဆွေအပြောကြောင့် ကိုမောင်ငယ်ကလည်း နောက်လိုက်သည်။
“ဆရာလေးမြို့မှာရည်းစားတွေ ထားခဲ့ဖူးလား… ဟီးဟီး”
ရယ်သလိုလိုနဲ့ဆရာလေး ကိုတင့်ဆွေပြောလိုက်ပေမဲ့ ဆရာလေး ငိုင်သွားတာကို ဒေါ်အေးမိက သတိထားမိသွားပါတယ်။
“တော်ကလည်း ဆရာလေးမှ မဖြေချင်ပါဘူးဆို… ကဲ… ချက်ကြီးရေ..မိုးလည်းချုပ်ပြီ… နင့်ဆရာလေးကို လိုက်ပို့လိုက်ဦး”
ချက်ကြီးလည်း ဆရာလေးကို ရွာထဲက ဆရာ/ ဆရာမတွေနေဖို့ ရွာကဆောက်ပေးထားတဲ့ အိမ်ကို ပြန်လိုက်ပို့ပါတယ်.။ ဆရာလေးက သူ့ကို..
“ရပါတယ်… ဆရာလေးရယ်…ဆရာလေးနဲ့ သောက်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်..”
ချက်ကြီးလဲဆရာလေးကိုနှုတ်ဆက်ရင်း သီချင်းတွေ အော်ဆိုကာ သူ့ရဲ့အိမ်ရှိရာကို
ချက်ကြီးနဲ့ တင့်ဆွေတို့ရဲ့ အပြန်အလှန် နှုတ်ဆက်သံတွေကြောင့် တင့်ဆွေနဲ့ တစ်ခန်းကျော်မှာ နေနေတဲ့ ဆရာမလေးလဲ့လဲ့ဟာနိုးလာပါတယ်။
“ဟင်းဟင်း… ဒို့မင်းသားတင့်ဆွေတော့ မူးလာပြီ ထင်တယ်”
ဘေးမှ သူမသူငယ်ချင်းလဲဖြစ် တစ်ကျောင်းထဲ ဆရာမလည်းဖြစ်တဲ့… သင်းသင်းမင်းက သူမကို တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်။
“ဟုတ်မယ်…သူကလည်း ဘာကြောင့်များ နေ့တိုင်းသောက်နေပါလိမ့်..”
သင်းသင်းမင်းရဲ့တင်ပါးလေးကို လဲ့လဲ့က မနာအောင်ဆွဲဆိတ်ရင်းနဲ့.ပြောလိုက်ပါတယ်။ မှောင်နေတာကြောင့် သူမရဲ့ရှက်သွေးလေးတွေကြောင့် မျက်နှာလေးနီနေတာကို သင်းသင်းမင်း မသိလိုက်တော့ပါဘူး..။ ထိုအချိန်မှာပဲ.. တင့်ဆွေက အဆောင်အောက်ကို ဆင်းသွားတဲ့ခြေသံကို ကြားရပါတယ်။ တင့်ဆွေမူးတိုင်း ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုနေကျပါ။ မကြာမီမှာပဲ… တင့်ဆွေရဲ့ ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုသံကိုကြားရပါတယ်။
“သစ်ရွက်ကလေးတွေလဲ မြေမှာခလို့လွှင့်ကြွေမြဲ အဖော်မဲ့နှုတ်ခမ်းများလဲ
ညင်သာတီးတိုးရွတ်ဆိုဆဲ အနမ်းပန်းများသည်လဲ ကြွေကာခမ်းခြောက်ရစ်ပြီကွယ်
အချစ်ရဲ့လိပ်ပြာလေး ဘယ်မှာပုန်းလို့နားပြီလဲ အဖော်ကွဲတဲ့ငှက်ကလေးများ
အပေါ်ကိုသာငေးငေးကြည့်ရင်းနဲ့သာ နှလုံးသားမျက်ရည်များကျဆင်းလာ သူပေးတဲ့ချစ်အနမ်းများ
ကတိစကားများကိုလဲ မြေလှန်ပြန်ရှာရင်း ဘဝအသစ်များပေါ်လဲ ညင်သာစွာလျှောက်လှမ်းရင်း
ချစ်တိုင်းလဲမညား စကားကိုသာ တီးတိုးရေရွတ်မိတာ ကိုယ့်နှလုံးသားအသည်းအိမ်မှာ
အချစ်များစွာ သူပေးတဲ့အချစ်များကိုသာ ထွေးပိုက်နေတုန်းအခိုက်မှာ
ကိုယ့်နှလုံးသားအသည်းတစ်နေရာ အချစ်ပေးတဲ့ဒါဏ်ရာများ အိုးအချစ် ..
လဲ့လဲ့ ခပ်တိုးတိုးလေးရေရွက်ရင်း အိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစားနေရပါတော့တယ်။
တင့်ဆွေကား သီချင်းဆိုတာကို ရပ်နားလိုက်ပြီး… ဂစ်တာကို ဘေးချလို့ အိပ်ထောင်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်ကိုထုတ်ပြီး မီးညှိကာ ဖွာရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ပါးပြင်မှ စိုစိစိဖြစ်လာတာကြောင့် သူ့လက်နဲ့ စမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ သူ့မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေက ပါးပြင်ကအလိုလိုကျဆင်းနေတာကို သိလိုက်ရပါပြီ။ ငါငိုနေမိပါလား..တင့်ဆွေတွေးမိပါတယ်..။
လွန်ခဲ့တဲ့(၂)နှစ်လောက်ကတော့ သူ့ဘ၀က ပျော်ရွှင်စရာအတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ရင်နာစရာ အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်… သူဒီလိုခံစားနေရတာပါ.။ ဖြစ်နိုင်ရင် အတိတ်ဆိုတဲ့ အရာကို သူ့ဘ၀ထဲမှာ မရှိစေချင်ပါဘူး။ ပြည့်ဖုံးကားချထားလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက သူ့အတွက် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပါ။
ကျေးလက်တောရွာလေးမှာ ကျောင်းဆရာအဖြစ် လာရောက်လုပ်ကိုင်ရင်း ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကို လာရောက်ကုစားနေတာပါ။ သူ့မိသားစုကိုပါ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး အားလုံးနဲ့ဝေးရာကို ထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။
ဆရာမဒေါ်လဲ့လဲ့နဲ့ ဆရာမသင်းသင်းမင်းတို့ပါ။ သူ့ဂစ်တာသံကြောင့် နိုးသွားဟန်တူပါတယ်။ အောက်ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်လာကြတာပါ။
“ဟုတ်တယ်..ဆရာမ..ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းသောက်လာတာနဲ့.. ဆရာမတို့ကို အနှောက်အယှက်ပေးသလို ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်.. အားနာလိုက်တာဗျာ..”
အားနာစရာမလိုပါဘူး…ဆရာရဲ့ဆရာ့အသံက နားထောင်လို့ကောင်းလို့ သင်းသင်းတို့က ချီးကျူးနေတာ…ဟိ…”
ဆရာမသင်းသင်းမင်းနဲ့ လဲ့လဲ့တို့က သူထိုင်နေတဲ့ ကွပ်ပစ်လေးမှာ ၀င်ထိုင်ရင်းပြောလိုက်ပါတယ်။
လဲ့လဲ့က သူ့ကိုကော်ဖီခွက်ကို လှမ်းပေးလိုက်တာကြောင့် သူလည်း ကော်ဖီခွက်ကို လှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။
“သြော်..လဲ့လဲ့ရဲ့ အိမ်က ပို့ပေးတာလေ”
“ကော်ဖီတိုက်တဲ့အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက် ဆိုပြပါလား.. ဦးထူးအိမ်သင်ရဲ့သီချင်းပါဘဲ… ကြယ်တွေစုံတဲ့ည ဆိုတဲ့သီချင်းလေးဆိုပြပါလား..”
လဲ့လဲ့က သူ့ကို တောင်းဆိုလိုက်တာကြောင့် သူလည်း ဂစ်တာကိုတီးခတ်ရင်းဆိုပြလိုက်ပါတော့တယ်..။
တင့်ဆွေရဲ့ သီဆိုပြမှုအောက်မှ သင်းသင်းမင်းနဲ့ လဲ့လဲ့လည်း.. စီးမျှောသွားပါတော့တယ်.။
“ကဲ ကျွန်တော်လည်း အိပ်တော့မယ်.. ဆရာမတို့ အိမ်မက်လှလှမက်ပါစေဗျာ…”
တင့်ဆွေကား လဲ့လဲ့တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး သူ၏ အခန်းတွင်းသို့ ပြန်ဝင်သွားချေပြီ။ လဲ့လဲ့နှင့် သင်းသင်းမင်းကား စကားဆက်ပြောနေကြသေးသည်။ အချိန်အတန်ငယ်ကြာပြီးနောက်…
“ကဲသင်းသင်းရေ ကိုယ်တွေလဲ သွားအိပ်ရအောင်…”
လဲ့လဲ့လည်း သင်းသင်းမင်းနဲ့ အတူအခန်းကို ပြန်ရန် ပြင်လိုက်စဉ်… ခုနက တင့်ဆွေထိုင်သွားသော ခုံပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံလိုလိုကျနေတာ မြင်လိုက်ရသည်။
ဆိုပြီး..ထိုဓါတ်ပုံကိုကောက်ယူလိုက်သည်။ အစစ်ပင် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ ဓါတ်ပုံကားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပုံပင်။ အချစ်ဆုံးကိုကိုသို့ ချစ်တဲ့ ကြည်ဖြူမှ အမှတ်တရဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးထားသည်။ ကောင်မလေးကတော့ တော်တော်ချောသည်။ လဲ့လဲ့စိတ်ထဲမှာ မနာလိုသလိုလို ဖြစ်လာသည်။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ သူမကိုယ်သူမမသိ။
ဆိုပြီး သူမက ထိုဓါတ်ပုံကိုသူမအကျီအိတ်ထဲ
ကပျာကယာ ထိုးဖွတ်လိုက်သည်။ ဘာကြောင့် ထိုသို့လုပ်မိသည်ဆိုတာကို သူမကိုယ်သူမ နားမလည်။ အဆောင်ထဲဝင်ကာ အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲချိန်အထိ.. သူမတော်တော်နှင့်အိပ်မပျော်.. တင့်ဆွေနှင့် ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်ကောင်မလေးအကြောင်းကို စဉ်းစားရင်း…
သူမ တလူးလူးတလိမ့်လိမ့်နှင့် အိပ်မပျော်နိုင်အောင် ဖြစ်နေတာပါ.။ ကိုတင့်ဆွေနဲ့ ဒီကောင်မလေးက ဘယ်လိုပတ်သက်ခဲ့တာလည်းဆိုတာ သူမအရမ်းသိချင်နေသည်။
အို.. ဒါလဲငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ.ဟုတွေးပြီး သူမကိုယ်သူမ တွေးလိုက်မိသည်။ ဒါက သူ့ကိစ္စဘဲဟာ.. ငါနဲ့ ဘာဆိုင်လို့စပ်စုချင်နေရတာလဲ… မိလဲ့လဲ့.. နင့်စိတ်ကို နင်ထိန်းစမ်း… ဆရာမလုပ်နေပြီးအရှက်မရှိဟု သူမကိုယ်သူမ ဖြေတွေးပြီး နိုးတစ်ဝက် ပျော်တစ်ဝက်ဖြစ်နေသည်။
သူမဘေးမသူငယ်ချင်းမ သင်းသင်းမင်းကတော့ အိမ်မက်ထဲမှာ နတ်သားလေးတွေနဲ့ ပျော်မြူးနေဟန်တူသည်။ အိပ်နေလိုက်တာများ သိုးလို့။ သူမစိတ်ထဲမှ မဆီမဆိုင် မကျေမနပ် ဖြစ်လိုက်သေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ သူမလည်း အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်။
“ဆရာတင့်ဆွေက ဒီမှာနေတာလား မသိဘူးခင်ဗျ..”
အဆောင်ရှေ့မှာ လူရွယ်တစ်ဦး။ လဲ့လဲ့.. ကိုတင့်ဆွေ အခန်းဘက်ကြည့်လိုက်တော့ လူမရှိ။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့ ကိုတင့်ဆွေကား ရွာထဲမှ အသိများထံသွားဟန်တူသည်။ လူရွယ်ကား ဆိုင်ကယ်ဖြင့်လာခြင်းဖြစ်သည်။
“သြော်…ကျွန်တော်က ဒီရွာကိုရောက်လာတဲ့ ကျန်းမာရေးမှူး အသစ်ပါ.. မနေ့ညကတည်းက ရောက်တယ်.. တင့်ဆွေနဲ့က ကျောင်းနေဘက်တွေပါ.. မနေ့ညကတည်းက သူ့ဆီလာမလို့ ညနက်သွားတာနဲ့ မနက်မှ လာမယ်ဆိုပြီးလာဖြစ်တာ.. လမ်းမှာ လွဲသွားတယ်နဲ့တူတယ်..တင့်ဆွေနဲ့က..”
“ဟုတ်မယ်..အကို့ထိုင်ပါဦး….သူပြန်လာတော့မှာပါ.. ဒါနဲ့… အကို့နာမည်က..”
ထိုလူရွယ်ကလည်း ပြုံးပြုံးရွင်ရွင်နဲ့ လှမ်းဖြေလိုက်ပါတယ်။
သို့ဖြင့်ထိုလူရွယ်ကား သင်းသင်းမင်းနှင့်လဲ့လဲ့တို့ အခန်းထဲကို အလည်လာခဲ့တော့သည်။
“ကျွန်တော်က ဒီနယ်ရောက်လာတော့ အသိမရှိဘူး ထင်နေတာ… ဒီရောက်တော့ သူကြီးကပြောမှ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း တင့်ဆွေမှန်းသိတယ်.. ဒါနဲ့ ညီမတို့နာမည်တွေက..”
“ညီမနာမည်က လဲ့လဲ့ပါ…သူကတော့ သင်းသင်းမင်းတဲ့.. ကိုတင့်ဆွေနဲ့ တစ်ကျောင်းထဲ ဆရာမတွေပါ..”
သို့ဖြင့် ကျော်သူအောင်နှင့် လဲ့လဲ့၊ သင်းသင်းမင်းတို့မှာ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် မိတ်ဆက်ရင်း ခင်မင်ရင်းနှီးသွားကြတော့သည်။ ကျော်သူအောင်က…
“ကျွန်တော်က တင့်ဆွေကြီး စိတ်တွေလေပြီး လွင့်သွားလိုက်တာ.. ဒီတစ်သက် ပြန်မတွေ့ရတော့ဘူး ထင်နေတာ….”
“ကိုတင့်ဆွေက ဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲ.. ကိုကျော်သူအောင်ရယ်.. ပြောပြနိုင်ရင် ပြောပြပါလား..”
“သြော်..သူငယ်ချင်းမင်းက လဲ့လဲ့တို့အခန်းဘက် ရောက်နေတာကိုး.. သူကြီးပြောလို့.. မင်းငါ့ဆီသွားတယ်ဆိုလို့ လိုက်လာတာ”
ဆိုပြီး ကျော်သူအောင်ကို ကိုတင့်ဆွေက ခေါ်သွားသဖြင့် လဲ့လဲ့သိချင်သော အကြောင်းအရာကား သိခွင့်မရလိုက်တော့ပါ။
တကယ်တော့ တင့်ဆွေကား နယ်မြို့ကြီးတစ်မြို့မှ အလွန်ချမ်းသာသော မိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောရလျှင်တော့ တင့်ဆွေ ဒီလိုနေရာမှာ ကျောင်းဆရာအဖြစ် လာလုပ်နေခြင်းသည်…။ ပြောရလျှင်တော့ လွန်ခဲ့သော(၂)နှစ်ခန့်က… တင့်ဆွေသည် ကြည်ဖြူဆိုသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် လွန်စွာ ချစ်ခဲ့ကြလေသည်။ ကြည်ဖြူသည်လည်း တင့်ဆွေကို ချစ်ခဲ့ပါသည်။ ပြောရလျှင်တော့ လင်မယားလိုပင်နေခဲ့သည့် အဆင့်။
ကျောင်းပြီးခါစ ကြည်ဖြူကား မြို့ထဲမှပွဲရုံတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နေသည်။ ပြောရလျှင်တော့ ကြည်ဖြူ အလုပ်လုပ်တာကို တင့်ဆွေ ဘာမှမပြောလို။ ဒါပေမဲ့ ပွဲရုံပိုင်ရှင် ဦးမြတ်ကျော်ကို တင့်ဆွေနည်းနည်းလေးမှ သဘောမကျ။ သူ၏ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်ပါတနာ.. ဒါပေမဲ့ သူ၏ဖခင်ဖြစ်သူ၏ပြောစကားများအရ ဦးမြတ်ကျော် ဆိုသူမှာ လူရှုပ်လူပွေ။ မိန်းမဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဆင်ခြင်သူတစ်ယောက် မဟုတ်သဖြင့် ကြည်ဖြူအတွက် သူစိုးရိမ်သည်..။ ဒါပေမဲ့ ကြည်ဖြူက နည်းနည်းမာနကြီးသည်…။ အလုပ်မရှိလျှင် တင့်ဆွေ မိဘများအထင်သေးမှာ စိုးသည်ဟုဆိုပြီး ပွဲရုံမှာ ဆက်လုပ်နေသည်။
“ကြည်ဖြူရယ်.. အဲ့ဒါဆိုလည်း မြန်မြန်လက်ထပ်ကြရအောင်လေ..”
လို့ ဆိုလိုက်ပြန်လျှင်လည်း ကြည်ဖြူက ငြင်းနှင့်။ ကြည်ဖြူအလုပ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြည်ဖြူနှင့် သူစကားများပေါင်းမနည်းတော့။ ယခုလဲ…
“ဘာလဲ..ကြည်ဖြူက အဲ့ဦးမြတ်ကျော်ဆိုတဲ့ လူကြီးကြည့်တာ ခံချင်နေလို့လား.. ကြည်ဖြူအလုပ်လုပ်ချင်ရင် အကိုတို့အလုပ်မှာ လာလုပ်.. ဒီအတိုင်းထိုင်နေလို့ရတယ်”
သူလည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် ပြောလိုက်သည်။ သူ့မိဘတွေကလည်း ချမ်းသာသူတွေ ဖြစ်တာကြောင့်ပင်။
“ကိုကိုနော်..ကြည်ဖြူဂုဏ်သိက္ခာကို မစွပ်စွဲနဲ့.. ကြည်ဖြူ မကြိုက်ဖူး..”
ကြည်ဖြူကား ငိုရင်းထွက်သွားချေပြီ.။ တော်တော်စိတ်ဆိုးနေသဖြင့် သူလည်း လိုက်မချော့ဖြစ်။ ကြည်ဖြူကလည်း သူ့ကို တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားသည်။
ကြည်ဖြူကား အလုပ်ထဲရောက်သည်အထိ စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် အလုပ်ကိုဖိဖိစီးစီးလုပ်နေသည်။ ကြည်ဖြူစိတ်တော်တော်ဆိုးနေသည်။ သ၀န်တို ကိုတင့်ဆွေကို။
“သမီး…ဒီနေ့စာရင်းတွေများလို့ အချိန်ပိုလေး နည်းနည်းဆင်းပေးပါဦး”
ဦးမြတ်ကျော်ကား တကယ်တော့ ကြည်ဖြူကို ဂွင်ဖန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ ကြည်ဖြူဆိုသော ဒေါင်းမလေးကား သူ၏ထောင်ချောက်ထဲ ၀င်လာချေပြီ.။
အအေးဗူးကို ဦးမြတ်ကျော်က ကြည်ဖြူရှေ့ ချပေးလိုက်သည်။ ပွဲရုံထဲမှာက လူရှင်းနေပြီ.. နည်းနည်းလဲမှောင်စပြုနေပြီကိုး…။ ကြည်ဖြူလဲ ခေါင်းတွေမူးနောက်လာသဖြင့် အအေးဗူးကို ဖောက်သောက်လိုက်သည်။ ဦးမြတ်ကျော်ကား စိတ်ထဲမှကျေနပ်နေသည်။ ထိုအအေးဗူးထဲတွင် ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် ထိုးထည့်ထားသော ရာဂကြွဆေးများ ပါရှိနေသည်။
ကောင်မလေးကား မလှုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီ။ တအင်းအင်းနှင့် ဦးမြတ်ကျော်ကား ကြည်ဖြူကို ပွေ့ဖက်ပြီး ဂိုဒေါင်နောက်မှ အခန်းထဲကိုခေါ်သွားသည်။
ကြည်ဖြူကား..ဆေးရှိန်ဖြင့် ရာဂစိတ်များ ပြင်းထန်နေသောကြောင့်.. တဟင်းဟင်းနှင့် ဦးမြတ်ကျော်ကို ဖက်နေသည်။ ဦးမြတ်ကျော်ကလည်း…သူ့ရဲ့ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ စားနေကျ ဖွားဖက်တော်ကြီးက ပုဆိုးချွတ်လိုက်သည်နှင့် ရှေ့ကို ငေါက်ခနဲထွက်လာသည်။ သူက ကြည်ဖြူထမိန်လေးကို လှန်တင်လိုက်သည်။ ကြည်ဖြူရဲ့ အဖုတ်လေးကို သူ့လက်ဖဝါး ကြမ်းကြမ်းကြီးဖြင့် ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်ရာ…
ကြည်ဖြူကား အဖုတ်တွင်အရေကြည်လေးများ ထွက်နေချေပြီ။ ဦးမြတ်ကျော်ကား ကြည်ဖြူရဲ့ အဖုတ်လေးကို သူ့ရဲ့ခြောက်လက်မ ကျော်ကျော်လောက်ရှည်သည့် လီးကြီးဖြင့် မညှာမတာဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။
ကြည်ဖြူရဲ့ အဖုတ်လေးကို ဦးမြတ်ကျော်မှ မညှာမတာ ဆောင့်လိုက်သောကြောင့် ကြည်ဖြူ မျက်ရည်ဝိုင်းသွားသည်။ ဦးမြတ်ကျော်ကား ဆက်တိုက်ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ကြည်ဖြူလည်း ကြွနေသောကြောင့် ဖင်ကြီးကိုပင့်ပင့်ပြီး လိုးချက်များကို ကော့ကော့ပေးကာခံယူနေသည်။ သူမစောက်ပတ်အတွင်းသား အသားမျဉ်များက ဦးမြတ်ကျော်လီးကို ဆွဲစုပ်နေသည်။
“ရှီး..ရှီး.. ဦးရေ..ဆောင့်ဆောင့်.. ကြည်ဖြူကို မညှာနဲ့..အ..အ..”
ကြည်ဖြူရဲ့အော်ဟစ်ညဉ်းညူသံလေးများက အခန်းထဲမှာ ဆူညံနေသည်။ ဦးမြတ်ကျော်အဖို့လည်း ကြည်ဖြူလိုကောင်မလေးရဲ့ အဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်း ကျပ်ကျပ်ကလေးကို လိုးရတာ ကောင်းကောင်းအရသာ တွေ့နေလေတော့သည်။ ဦးမြတ်ကျော်ကား ကြည်ဖြူကို မညှာတော့ပါ.. သူပြီးခါနီးပြီဖြစ်လို့ ကြည်ဖြူရဲ့အဖုတ်လေးကို သူ့လီးကြီးနဲ့ အသားကုန်ဆောင့်ပါတော့သည်။
မကြာမီမှာ သူ့လီးထိပ်မှာ ပူခနဲဖြစ်သွားပြီး. လီးချောင်းထဲမှ လရေဖြူဖြူပြစ်ပြစ်များကို ကြည်ဖြူရဲ့ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားနံရံများကို ပန်းထုတ်နေပါတယ်။ ကြည်ဖြူအဖို့လဲ ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့ လီးကြီးကို စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေနဲ့ ညှစ်ညှစ်ပြီးဆွဲယူကာ စိတ်ကို ဖြေလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာ သူမစောက်ခေါင်းထဲက သုတ်ရည်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ထွက်ကျလာပါတော့တယ်။
ဦးမြတ်ကျော်က အနည်းငယ်မောသွားတာကြောင့် ပက်လက်လှန်ပြီး အနည်းငယ်အမောဖြေနေပါတယ်။ ရာဂကြွဆေးအရှိန်မပြေသေးတဲ့ ကြည်ဖြူဟာ ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့လီးကို သူမလက်နဲ့ ကစားပေးနေပါတယ်။ ဦးမြတ်ကျော်က ကြည်ဖြူ့ခေါင်းကို သူ့လက်နဲ့ဖွပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ ကြည်ဖြူနှုတ်ခမ်းကိုတေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။
သမီးလို့ပြောရာကနေ ခလေးလို့ အရှက်မရှိ ခေါ်လိုက်ပါသေးတယ်.။ ကြည်ဖြူကတော့ ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့လီးကြီးကို စတင်စုပ်နေပါပြီ။ စိတ်တွေ ကြွနေတာကြောင့် သူမရဲ့စုပ်ချက်တွေက အရမ်းကို ပြင်းထန်နေတာကြောင့် ဦးမြတ်ကျော် တစ်ယောက် မျက်လုံးကြီးမေးပြီး ခံလို့ကောင်းနေပါတယ်။
ဦးမြတ်ကျော်ကား ကြည်ဖြူရဲ့လီးစုပ်ပေးတာကို ကောင်းကောင်းကြီးခံလို့ကောင်းနေပါတယ်။ ကြည်ဖြူ စုပ်ပေးတာကောင်းတာကြောင့် သူ့လီးကြီးကလည်း နဂါးတစ်ကောင်လို ပြန်ထောင်ထလာပါတယ်။ ကြည်ဖြူရဲ့တံတွေးတွေနဲ့စိုစွတ်ပြီး ပြောင်လက်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့လီးကို ကြည်ဖြူပါးစပ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး..
“ခလေး ဖင်ကုန်းပေးပါလာ.. ဦးနောက်ကနေ လိုးမလို့..”
လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ကြည်ဖြူကလည်း လေးဖက်ထောက်ပြီး သူမဖင်လေးကို ကော့ထားပေးပါတယ်။ ဝိုင်းဝန်းအိစက်နေတဲ့ ကြည်ဖြူရဲ့ ဖင်အိုးဝိုင်းဝိုင်းလေးအလယ်မှာ.. အရည်တွေ စိုစွတ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်း ဖောင်းဖောင်းလေးက ပြူနေပါတယ်။ ဦးမြတ်ကျော်က သူ့လီးကြီးကို ကြည်ဖြူအဖုတ်နဲ့တေ့ပြီး ဒစ်မြုတ်ရုံသွင်းပြီး ကြည်ဖြူရဲ့စောက်စိလေးကို လီးထိပ်နဲ့ပွတ်ပေးပါတယ်။
ကြည်ဖြူက ဖင်လေးကိုနောက်သို့ဆုတ်ဆုတ်ကာ ကော့ကော့တက်လာပါတယ်။ ကောင်မလေး ခံချင်စိတ်တွေပြင်းထန်လာတာကို.. ဦးမြတ်ကျော် သိပါတယ်။
“အို..ဦးရယ်.အဖုတ်ကွဲရင်ကွဲသွားပါစေ… လိုးပေးပါတော့ဆို… အင်းအင်း..”
ကြည်ဖြူက အခုအချိန်မှာ ဦးမြတ်ကျော်လိုးပေးတာကို လိုချင်တာကလွဲပြီး ဘာမှမမြင်တော့ပါ..။ ဦးမြတ်ကျော်က ကြည်ဖြူရဲ့ ခါးလေးကိုကိုင်ပြီး အသားကုန်ဆောင့်ပါတော့တယ်။
ကြည်ဖြူရဲ့ညဉ်းညဉ်သံ..ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့လီးနဲ့ သူမအဖုတ်ကို အဆက်မပြတ်မနားတမ်း ဆောင့်ချသံတွေဟာ အခန်းထဲမှာ ဆူညံနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဦးမြတ်ကျော်ဟာလည်း ကြည်ဖြူ အဖုတ်ထဲကို လရေတွေ ပန်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကြည်ဖြူလဲ စောက်ရေတွေထွက်သွားပြီး
နှစ်ယောက်သား ထပ်ရက်ကြီးမှောက်ကျကာ အမောဖြေနေကြပါတော့တယ်။
ဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေသော ကြည်ဖြူမျက်နှာလေးက ဖြူဖတ်ဖြူလျော်နှင့် ယခုထိတိုင် သတိကလည်မလာသေး…။ မနေ့က သူနဲ့စကားများသွားတုန်းက ကြည်ဖြူစိတ် အဲ့လောက်မဖြစ်ဟု သူထင်မိသည်.။ ကြည်ဖြူတစ်ယောက် မနေ့က အိပ်ဆေးတွေ တစ်ဗူးလုံးသောက်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
ကြည်ဖြူအတွက် အသက်ရှင်ရန် လက်ကျန်အချိန်တွေက နည်းပါးနေပြီဟု သူရိပ်မိသည်။ ဆရာဝန်ကြီး၏ ပြောစကားအရဆို…ကြည်ဖြူအသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်က မရှိတော့။ ကြည်ဖြူမိသားစုတွေက အလိုက်သတိပင် အခန်းပြင်သို့ ထွက်သွားကြပြီ။ ယောင်္ကျားတန်မဲ့ တင့်ဆွေ ငိုချင်လာသည်…။
ကြည်ဖြူရဲ့လက်ကလေးကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း သူမေးမိသည်။ ကြည်ဖြူရဲ့လက်ကလေးတွေက အေးစက်နှေသည်။ ကြည်ဖြူက အားယူကာ စကားပြောရန်ကြိုးစားသည်။
“မလိမ်ပါနဲ့ ကိုကိုရယ်…ကြည်ဖြူမနေရတော့ပါဘူး.. ကြည်ဖြူသိပါတယ်..”
သူ့မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များက အလိုလိုကျဆင်းလာသည်…။
“ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ..ကြည်ဖြူရယ်.. ကိုကို့ကို စိတ်ဆိုးတာနဲ့လုပ်ရလား”
သူ့အသံများကတုန်ယင်နေသည်။ ကြည်ဖြူလည်း မျက်ရည်များကျဆင်းလာသည်။
“ကိုကို့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး.. ကိုကိုရယ်…ကြည်ဖြူ့မိုက်ပြစ်နဲ့ ကြည်ဖြူပါ… ကြည်ဖြူလေ… ကြည်ဖြူ.. ကိုကို့စကားကို နားမထောင်မိတာကြောင့်…
မနေ့ကလေ.. မနေ့က ကြည်ဖြူအသံလေးတွေ မောသံပေါက်နေပြီ…”
“ကိုကို့ကို ကြည်ဖြူ မပြောရရင် ကြည်ဖြူ ကျွတ်မှ မဟုတ်ဖူး..ကိုကိုရဲ့.. မနေ့က.. ကြည်ဖြူပွဲရုံသွားတော့…ဦးမြတ်ကျော်ဆိုတဲ့ လူကြီးကလေ… ကြည်ဖြူကို ဆေးတွေခပ်ပြီး.. စော်.. စော်..ကား..ခွင့်..ခွင့်လွတ်ပါကိုကို…”
ကြည်ဖြူရဲ့ဇက်ကလေးလည်ကျသွားပြီ။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ… ကြည်ဖြူရယ်… လူယုတ်မာ ဦးမြတ်ကျော်…။ သူ့ရင်တွေ ပွင့်ထွက်မတတ် ခံစားရသည်။ တင့်ဆွေ ဦးမြတ်ကျော်ဆိုတဲ့သူကို အမုန်းကြီး မုန်းသွားပြီ။ ဦးမြတ်ကျော်ရေ… ခင်ဗျားထမင်းဝအောင်စားထား.. ကျုပ်ခံစားရသလို ခင်ဗျားလဲ ခံစားစေရမယ်ဟု စိတ်ထဲမှ ကြုံးဝါးလိုက်လေတော့သည်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကျော်သူအောင်ရဲ့ ပြောစကားကြောင့် တင့်ဆွေ လည်းကျော်သူအောင် ပြရာဘက်ကိုကြည့်လိုက်သည်။ အအေးဆိုင်ထဲသို့ ၀င်သွားသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်..။ ကောင်မလေးကား ကျောင်းတက်နေရာမှမြို့သို့ ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဟု သိရသည်။ ဦးမြတ်ကျော်လို လူယုတ်မာကြီးသည် သူ့မှာ ဒီလိုသမီးငယ်ငယ်ချောချောလေးရှိတာကို သူများ သားသမီးကို သားသမီးချင်းမစာမနာ ဖျက်ဆီးတတ်သည်။
ကောင်မလေးက ပိုးဟပ်ဖြူလေးလိုပင်။ ဖြူဖြူသေးသေးလေး.။ သူ၏စုံစမ်းချက်များအရ ရည်းစား မရှိဟုသိရသည်။ တွေ့ပြီလေ…ဦးမြတ်ကျော်.. ဒီတစ်ခါတော့ဒီလူအလှည့်ဘဲ။ တင့်ဆွေကား ထိုင်ရာမှ ထလိုက်သည်။ ကောင်မလေးကား အအေးဝယ်ရာမှ ပြန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တင့်ဆွေလည်း ကောင်မလေးပြန်အထွက်တွင် တမင်သက်သက် ၀င်တိုက်လိုက်သည်။
ကောင်မလေးဆွဲလာသော အအေးဗူးနဲ့ အသီးတွေက မြေပေါ်ကို ပြုတ်ကျကုန်သည်။
ကောင်မလေးကား လဲကျသွားရာမှ ထပြီး.. သူ့ကိုရန်တွေ့တော့သည်။
“သြော်…ညီမလေးရဲ့ အအေးတွေ သစ်သီးတွေကို အကိုပြန်ဝယ်ပေးပါ့မယ်.. စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်.. အကိုကလည်း အတွေးလွန်လာလို့ပါ..”
“အဲ့ဒါဆိုရင် ဆိုင်ထဲလိုက်ခဲ့ပါလား.. အအေးတွေ၊ သစ်သီးတွေ အစားပြန်ဝယ်ပေးရင်း တစ်ခုခုကျွေးပါရစေ..”
“ရပါတယ်..အကို… သက် တောင်းပန်ပါတယ်.”
“ဒါနဲ့ညီမလေးကို ဒီအအေးဆိုင်လာတာ မတွေ့ဘူးပါဘူး”
“ဟုတ်ပါတယ်..အကို…သက်က လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကမှ ကျောင်းက ပြန်လာတာ..”
“သြော်..ဒါ့ကြောင့်မမြင်ဖူးတာကိုး… အကို့နာမည် တင့်ဆွေပါ…ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာဘဲနေတယ်”
ကောင်မလေးက ပြုံးရွှင်စွာပြန်ပြောသည်။ ပါးချိုင့်လေးပါတာဘဲ ကောင်မလေးမှာ တော်တော်ချစ်စရာကောင်းသည် ပြုံးလိုက်ပုံက အပြစ်ကင်းစင်သည်။ တင့်ဆွေစိတ်ထဲပင် မလုံမလဲဖြစ်သွားရတော့သည်။
သက်သက်ချို အိမ်ရောက်သည် အထိ ရင်ခုန်မှုကမပျောက်ချင်သေး..။ တင့်ဆွေဆိုသော အကိုကို မြင်မြင်ချင်းခင်မိသွားခဲ့သည်။ သူမ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပင်ပေးထားခဲ့သည်။ တစ်ခါမှ ဒီလိုရင်ခုန်တာမျိုးဒီအရွယ်ရောက်သည်အထိ မဖြစ်ဖူးခဲ့။
အိမ်ရှေ့ဒန်းမှာထိုင်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်နေသော သူမ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်သန်းသန်းဆင့်၏ အသံကြောင့် အနည်းငယ်တုန်သွားသည်။
“ဟင်းဟင်း…သမီးရယ် မေမေရောက်နေတာ ကြာလာပြီ.. ဘာလဲ..သမီးကောင်လေးအကြောင်း စဉ်းစားနေတာလား…”
သမီးဖြစ်သူစကားကြောင့် ဒေါ်သန်းသန်းဆင့် က သက်သက်ချိုကို ဖက်လိုက်ပြီး။
“မေမေ့သမီးလိမ္မာမှန်း သိပြီးသားပါ… မေမေက သမီးကိုချစ်လို့စတာ…”
“ဖေဖေရော ပွဲရုံက ပြန်မရောက်သေးဘူးလား.. မေမေ..”
ဟင်း..ညဉ်းဖေဖေကတော့ သမီးရယ် ဒီအချိန်ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာဘူး.. အလုပ်ရှုပ်လို့ လို့ပြောတာဘဲ..”
ဒီတစ်ခါလိမ်လိုက်ရသူက ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်။ သမီးဖြစ်သူမသိအောင် လိမ်ညာဖုံးကွယ်နေရပေမဲ့.. ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးမြတ်ကျော်၏ အကျင့်ကိုသိနေတယ်။ ဒီအချိန်ဆို သူ့မယားငယ်တစ်ယောက်အိမ်မှာ ရှိနေမှာပေါ့။ သမီးလေးမျက်နှာကြောင့်သာ သည်းခံပေါင်းသင်းနေရသည်။ ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့ သတင်းကို ကြားပြီး ဦးမြတ်ကျော်ကို စိတ်ကုန်နေတာကြာလှပြီ။
ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်နှင့် သက်သက်ချိုလည်း လမ်းထိပ်က သူမသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရိုစီ၏ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ရိုစီကား သူမငယ်သူငယ်ချင်း။ ကျောင်းသွားတော့လည်း အတူတူ၊ ဆိုးတူကောင်းဘက်။ သူမမှာ ဖွင့်ပြောစရာကြုံလာတိုင်း ရိုစီနှင့်တိုင်ပင်နေကျ။ ရိုစီနှင့်တွေ့လျှင် ဒီနေ့အအေးဆိုင်မှာ တိုက်မိပြီး ခင်မင်ခဲ့ရသော သူမရင်ကို ဖိုစေခဲ့သည့် ကိုလူချော ကိုတင့်ဆွေအကြောင
လဲ့လဲ့ကား စိတ်ပူနေသည်။ ကိုတင့်ဆွေကား မြို့ကို တက်သွားရာမှ ခုချိန်ထိပြန်မလာ။ ဖြစ်ချင်တော့ သင်းသင်းမင်းကလည်း ဒီနေ့မှဘဲ မြို့မှာ သူမမိဘတွေ ရောက်နေသည်ဆိုသဖြင့် ညနေကဘဲ သူမမိဘတွေကို ကြိုဆိုရန်သွားပြီ။ ဒါကြောင့် အဆောင်မှာ သူမတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေပါတယ်။ ကြောက်တာတော့ မကြောက်ပေမဲ့ ညကမှောင်လာတော့ သူမအနည်းငယ် အားငယ်စိတ်တွေ ၀င်လာပါတယ်။ ကိုတင့်ဆွေလည်း ဒီညပြန်မရောက်လောက်တော့ဘူးထင်တယ်။
အဆောင်ရှေ့မှာခေါ်သံကြားရသည်။ ကာလသား ခေါင်းဆောင် ကိုချက်ကြီးအသံပေဘဲ။ သူမအခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကိုချက်ကြီးနဲ့ ကိုတင့်ဆွေ။ ကိုတင့်ဆွေ မူးလာပြီ။ ခေါင်းကငိုက်စိုက်ကျလို့။ ချက်ကြီးက တွဲနေရသည်။
ကိုတင့်ဆွေအသံကလေးနေပြီ။ လူကလည်း ယိုင်တိုင်တိုင်…
“ရပြီ..ကိုချက်ကြီး ကျေးဇူးတင်တယ်…. ရတယ်..ရတယ်..”
“ဒါဆို..သွားမယ်နော်..ဆရာလေး.. ဆရာမ ကျွန်တော်ဆရာလေးကို ထားခဲ့ပြီနော်…စိတ်ချမယ်..”
လဲ့လဲ့စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။ ချက်ကြီးကတော့ သီချင်းတွေ တကြော်ကြော်အော်ဟစ်ရင်း.. ယိုင်တိုင်တိုင်ခြေလှမ်းများနဲ့ ရွာလယ်လမ်းအတိုင်း ပြန်လျှောက်သွားတာကို မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။
တင့်ဆွေကချက်ကြီးသွားရာလမ်းကို ကြည့်ပြီးလဲ့လဲ့ကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ တဟက်ဟက်နဲ့ပြောရင်း သူလည်း မဟန်နိုင်တော့ပါဘူး။ အဆောင်ရှေ့လှေကားရင်းမှာ ခေါင်းမှီပြီး မူးဝေကာမထနိုင်ဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ လဲ့လဲ့ကိုမေ့သွားပါတယ်..။
သူ့ပါးစပ်ကလည်း ကယောင်ကတမ်းတွေ ညဉ်းတွားနေပါတယ်။
တင့်ဆွေကိုလှုပ်နှိုးပေမဲ့ တင့်ဆွေက မထလာတာကြောင့် လဲ့လဲ့စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။
“ကဲကဲ..အကို အခန်းထဲ လဲ့လဲ့လိုက်ပို့မယ်.. ဘာလို့ ဒီလောက်တောင်သောက်ရတာလဲ အကိုရယ်…”
လဲ့လဲ့က တင့်ဆွေဂျိုင်းအောက်ကနေ၀င်ပြီး သူမပုခုံးပေါ်လက်တင်ကာ တွဲထူလိုက်ပါတယ်။ မူးနေတာကြောင့် တင့်ဆွေရဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးက သူမအပေါ်မှီထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တင့်ဆွေရဲ့ အထိအတွေ့ကိုရနေပြီး.. ယင်ဖိုတောင် မသန်းဖူးသေးတဲ့ သူမအဖို့ ရင်ခုန်သံက မြန်လာပြီး
တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ သူမရင်ခုန်သံကို သူမပြန်ကြားနေရပါတယ်။
တင့်ဆွေကားတော်တော်မူးနေဟန်တူပါတယ်။ လဲ့လဲ့.. စိတ်ထဲအဲ့လိုခေါ်သံကြားတာနဲ့ သူမရင်ထဲ ၀မ်းနည်းမှုတွေသာဖြစ်လာပါတယ်။ တင့်ဆွေ..ကို သူမက ဂရုစိုက်နေရပေမဲ့ တင့်ဆွေကတော့ အတိတ်ဟောင်းကိုဘဲ သတိရနေတာပါ။ သူမစိတ်ထဲမှာ ၀မ်းနည်းမှုကြောင့် မျက်ရည်လေးများ စို့လာပါတယ်။
တင့်ဆွေကို သူ့ရဲ့အခန်းထဲလိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်။ မနိုင်မနင်းနဲ့ တင့်ဆွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို တွဲရင်း ကုတင်အပေါ်ဆွဲအတင်မှာ.. ယိုင်လဲသွားပြီး သူမကကုတင်ပေါ်ကို ပက်လက်လှန်ကျသွားပြီး
တင့်ဆွေက သူမအပေါ်ကို ထပ်ရက်ကြီး ကျလာပါတော့တယ်။
ရှက်စိတ်ကြောင့် လဲ့လဲ့ ရုန်းဖို့ကြိုးစားမိပေမဲ့.. တင့်ဆွေက သူမအပေါ်ကဖယ်မပေးဘဲ.. သူမပါးတွေကို တရှုပ်ရှုပ်နမ်းနေပါတယ်။ တစ်ခါမှ ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ မနမ်းဖူးသေးတဲ့ပါးပြင်ကို တင့်ဆွေက အငမ်းမရနမ်းနေပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ သက်သက်ချိုလို့ဘဲ ထင်နေမိတာပါ။ လဲ့လဲ့ကို
“ခလေးရယ်ကိုယ့်ကို အကြာကြီးခွဲရက်တယ်နော်.. ကိုယ်ခလေးကို အရမ်းလွမ်းနေတာသိလား…”
လဲ့လဲ့လည်း တုန်ယင်နေတဲ့ အသံလေးနဲ့…
လို့ ပါးပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေစီးကျလာရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ တင့်ဆွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိပါဘူး.။ တင့်ဆွေမူးမူးနဲ့ သူမအပေါ်လူမှားနေတာကို သူမဘာလို့ မငြင်းဆန်မိမှန်းမသိပါဘူး.။ တင့်ဆွေရဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် ရင်ခုန်သံလည်း မြန်လာပါတယ်။
မိုးစက်မိုးမှုန်တွေကျဆင်းလာပြီး မိုးက သည်းသည်းမဲမဲရွာလာပါပြီ။ မိုးအကုန် ဆောင်းအကူးမှာ နောက်ဆုံးလက်ကျန် မိုးရွာချလာတာပါ။ မိုးသည်းသည်းမဲမဲ ရွာချလာပြီး တလောကလုံး အမှောင်ဖုံးသွားပါတယ်။ အကိုတင့်ဆွေရဲ့လက်တွေက သူမရဲ့ ထမိန်အောက်လေးကို လက်နိုက်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ ပေါင်ခွကြားက တစ်ခါမှ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်က မကိုင်ဘူးတဲ့ အပျိုစင် စစ်စစ်ပိပိလေးကို ပွတ်ကာကိုင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့။
သူမရဲ့ ငြင်းဆန်သံလေးဟာ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာချလိုက်တဲ့ မိုးသံတွေရဲ့ ကြားမှာဘဲ လွင့်ပျံ ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ နဂိုက မစွမ်းရင်းလည်းရှိ ကန်စွန်းခင်းလည်း ငြိနေတဲ့ လဲ့လဲ့အဖို့ ကိုကိုတင့်ဆွေရဲ့ လူမှားပြီးလုပ်မိတဲ့ အပြုအမူတွေကို ငြင်းဆန်နိုင်စွမ်း မရှိတော့တာ အမှန်ပါဘဲလေ။
လဲ့လဲ့က တိုးတိုးလေးငြင်းဆန်ပေမဲ့.. ကိုကိုတင့်ဆွေက သူမအပေါ်မိုးပြီး သူမနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ပြီး စုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူမ အသံတိတ်သွားပါတယ်။ ကိုကို့ရဲ့ အနမ်းတွေကြားမှာ သူမမူးယစ်သွားပါပြီ။ သူမထမိန်အောက်ကို လက်နှိုက်ပြီး ကိုကိုတင့်ဆွေက သူမပိပိလေးကို ပွတ်ပေးနေတာကြောင့် သူမစိတ်တွေလဲကြွလာပြီး ကိုကိုရင်ဘတ်ကြီးကို တွန်းထားတဲ့ သူမလက်ကလေးတွေ ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။
တင့်ဆွေကလည်း အရမ်းကိုမူးနေတာပါ။ သူ့လက်က သူ့ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်တာတောင် ချော်နေပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ..လဲ့လဲ့က သူမထမိန်လေးကို ကိုကိုတင့်ဆွေမချွတ်ခင် ဖြေလျှော့ချလိုက်မိပါတယ်။ ကိုကိုတင့်ဆွေက မူးမူးနဲ့ သူ့ရဲ့ဒုတ်ကြီးကို သူမထဲထည့်ရာမှာ ချော်ပြီး ဖင်ခွကြားကို လှမ်းထောက်မိတာကြောင့် သူမဖင်ကျောပါ စိမ့်သွားရပါတယ်။
နည်းတဲ့ဒုတ်ကြိးလား ကိုကိုရယ်..။ ဒါပေမဲ့ လဲ့လဲ့ကတော့ ကိုကိုချစ်တာကို ခံယူချင်နေပြီမို့ ဒုတ်ကြီးကိုကိုင်ပြီး. သူမပိပိ နှစ်ခြမ်းကြားထဲကို ရောက်အောင်ကို တေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ တင့်ဆွေကလည်း မူးမူးနဲ့လဲ့လဲ့ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲကို သူ့ဒုတ်ကြီးကို တစ်ဇွတ်ထိုးကြီးဆောင့်လိုက်ပါတယ်။
နာကျင်မှုကြောင့်လဲ့လဲ့ ညဉ်းညူသံလေးထွက်သွားပြီး တုန်ယင်နေတဲ့ လက်ကလေးနဲ့ ကိုကိုတင့်ဆွေရဲ့ ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးကို တွန်းထားမိပါတယ်။ ကိုကိုကတော့ လဲ့လဲ့ကို မညာတော့ပါဘူး။ မရပ်မနားကို တဇွတ်ထိုးဆောင့်တော့တာပါဘဲ။ လဲ့လဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ရှက်မိပါတယ်။
သူမပိပိအတွင်းသားလေးတွေကို ပွတ်တိုက်သွားတဲ့ ကိုကိုတင့်ဆွေရဲ့ဒုတ်ကြီးကို သူမအတွင်းသားလေးတွေက သူမ မသိလိုက်မိခင်မှာပင် ဖမ်းဖမ်းညှစ်နေတာကြောင့်ပါ။
ကိုကိုရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ အချက် (၁၀၀)လောက်မှာ သူမစိတ်ထဲ ငိုချင်သလိုရယ်ချင်သလို ဖြစ်လာပြီး အဖုတ်ထဲက ဆီးသွားချင်သလိုလို ခံစားချက်မျိုး ပြင်းထန်လာပြီး ကျင်လာတာကြောင့် တအိုးအိုး ညဉ်းညူပြီး ကိုကို့ကို အသားကုန် ဖက်ထားမိပါတယ်။ ကိုကိုဆက်ပြီး ဆက်တိုက်လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် ဆောင့်တဲ့အခါ.. သူမတစ်ကိုယ်လုံး လေဟာနယ်ထဲမြောက်တက်သလို ခံစားရပြီး
သူမအဖုတ်ထဲကနေ ပူခနဲဖြစ်သွားကာ အရည်တွေ ထွက်လာတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။
ကိုကိုတင့်ဆွေရဲ့ ဒုတ်ကြီးထဲက အရည်တွေက တပြစ်ပြစ်နဲ့ထွက်လာပြီး သူမအဖုတ် အတွင်းသားနံရံတွေကို ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး သူမအဖုတ်လေးထဲကနေ ကိုကိုတင့်ဆွေက သူ့ဒုတ်ကြီးကို ချွတ်လိုက်ပြီး သူမရင်ခွင်ထဲမှာ
တစ်စစ်စစ်ကိုက်ခဲနေသော ခေါင်းကို တင့်ဆွေစမ်းရင်း
ညကတော်တော်များသွားတာပါလားလို့ စဉ်းစားမိသည်။ ဘာတွေဖြစ်လို့ ဖြစ်ခဲ့မှန်းမသိ.. ထူးဆန်းတာတစ်ခုတော့ စဉ်းစားမိသည်။ ညက အိမ်မက်လိုလိုထင်မိသည်။ အရမ်းမူးနေသောကြောင့် ထင်သည်။ ထိုအိမ်မက်လိုလိုထင်မိသော အရာမှာ သက်သက်ချိုဖြစ်နေတာကိုတော့ သူမှတ်မိတယ်။ သက်သက်ချိုက အရမ်းလုပ်လို့ကောင်းတာပဲ။ မနေ့ညက မိုးရွာတာကိုလည်းသူမှတ်မိသည်။ အဲ့အချိန် သက်သက်ချိုရောက်လာတာဘဲ။
တင့်ဆွေကိုက်ခဲနေသော နားထင်ကို လက်မဖြင့်ဖိရင်း သူ့ဘေးနားမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှုသံလိုလို ကြားရသည်။
သူခေါင်းနားပန်းကြီးသွားသည်။ ရင်ထဲ ရထားဆယ်စင်း တစ်ပြိုင်ထဲမောင်းသွားသလို လဲ့လဲ့…သူ့ဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေသည်။ ဒါဆို..ညက.. သူမူးမူးနဲ့သက်သက်ချိုဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့… သူဟာ..
လဲ့လဲ့ပေါ့…ပြသနာဘဲ…။ သူကြည့်လိုက်တော့ လဲ့လဲ့မျက်နှာလေးက အိပ်ပျော်နေလို့လားမသိ အပြစ်ကင်းစင်နေသည်..။ လဲ့လဲ့ပါးက လိမ်းနေကျသနပ်ခါးလေးတွေက ပျက်ပြယ်နေပြီ။ အဆီလေးပြန်နေတဲ့ လဲ့လဲ့မျက်နှာကို သူသေသေချာချာ မိုးကြည့်နေသည်။
တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးမပါလား။ညက. ညက..ဒုက္ခဘဲ သူတွေးရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်လာသည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ။ သူကျူးလွန်ခဲ့သော အမှားအတွက် ဘယ်လိုတောင်းပန်ရမလဲလို့ စဉ်းစားနေသည်…။ သူလဲ့လဲ့ဆီက ကိုယ်သင်းရနံ့လေးကို ရနေတယ်။ သူ့နှာခေါင်းက
လဲ့လဲ့ရဲ့နဖူးလေးကို သူဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ… လဲ့လဲ့ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေက ပွင့်လာပါတယ်။
“အို…ကိုကိုဘာမှန်းလဲမသိဘူး.. ခလေးအရမ်းရှက်တယ်.. ညက.. ကိုကိုသိပ်ဆိုးတယ်..သိလား…”
လဲ့လဲ့ကညုတုတုအသံလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ တင့်ဆွေစိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ပါဘူး…လဲ့လဲ့ရဲ့ ပါးပြင်လေးကို သူတစ်ရွတ်ရွတ် နမ်းလိုက်ပါတယ်။
“အို…ကိုကိုသိပ်မကဲနဲ့ကွယ်.. လဲ့လဲ့တစ်ကိုယ်လုံး ကျေတော့မှာဘဲ..”
“တင့်ဆွေရေ..တင့်ဆွေ.. မင်းအဖေ၊ အမေတွေ လိုက်လာတယ်ဟေ့..”
ဆိုတဲ့အဆောင်ရှေ့က ကျော်သူအောင်ရဲ့ ခေါ်သံကြားရပါတယ်။ တင့်ဆွေလည်း ခေါင်းနားပန်းကြီးသွားသလို လဲ့လဲ့လည်း မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ ဟိုက်..အဖေနဲ့အမေက ငါရှိတဲ့အရပ်ကို ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုလိုက်လာပါလိမ့်လို့ သူစဉ်းစားလိုက်ပေမဲ့ စဉ်းစားချိန်တောင် မရလိုက်ပါဘူး..။ သူနေတဲ့ အဆောင်အခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်ပြီးလူအုပ်ကြီးက ၀င်လာပါတယ်။ နှစ်ယောက်သား ကမန်းကတန်း ကုန်းရုန်းထပေမဲ့ တင့်ဆွေအောက်ပိုင်းက ဗလာကြီးပါ။
ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ… ၀င်လာကြတဲ့ လဲ့လဲ့သူငယ်ချင်းဆရာမ သင်းသင်းမင်း၊ ကျော်သူအောင်၊ တင့်ဆွေ အဖေနဲ့အမေတို့ကတော့ မျက်နှာကို တစ်ဖက်ကိုသာ လွဲထားလိုက်ရပါတော့တယ်။
ကာလသားခေါင်းဆောင်ချက်ကြီးက ကာလသားများနှင့်အတူ အဆောင်ရှေ့အပေါက်ဝမှ
တင့်ဆွေက သူ့တိုက်ပုံအိတ်ထဲလက်နှိုက်ကာ စမ်းလိုက်သည်…။ ပိုက်ဆံက (၂)သောင်းဘဲ ရှိတော့သည်။
“နိုးနိုး…ဒီလောက်နဲ့မရဘူး ဆရာလေး…နို့မို့ဆို ဖယ်မပေးဘူး..”
ချက်ကြီးက ဆက်ညှော်နေသည်။ လဲ့လဲ့က သူမပိုက်ဆံအိတ်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီး…
ဆိုပြီး ပေးသောငွေများကို ယူကာ ထန်းတောက ကိုမောင်ငယ်တို့ဆိုင်ကို ချီတက်သွားကြတော့သည်။
ထိုအချိန်မှာတော့ ရွာထိပ်က ကုက္ကိုလ်ပင်ကြီး အောက်မှာတော့… သူတို့မသိလိုက်သည့်
စကားပြောနေကျသည့်စုံတွဲ(၁)တွဲက ရှိနေသေးသည်။ ဆရာမလေးသင်းသင်းမင်းနှင့် ကျော်သူအောင်တို့စုံတွဲ.. ဘာတွေပြောပြီး.. သဘောကျနေသလဲဆိုတော့….
“ကို….အခုတော့ ကိုတင့်ဆွေကြီးက အကိုဆင်ထားတဲ့ ဂွင်ထဲကို ကွိခနဲဘဲနော်…”
“ဟုတ်တာပေါ..သင်းသင်းရယ်…အကိုက ရောက်ခါစ သင်းသင်းကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားရတာ.. ဟိုကောင်ကြီးရော လဲ့လဲ့ရော မသိအောင်…ဟီးဟီး..”
ကျော်သူအောင်ကား ပါးစပ်ကြီးဖြဲကာ သဘောကျနေသည်..။ တကယ်တော့ သင်းသင်းမင်းနှင့် ကျော်သူအောင်ကား ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်မှာ သင်တန်းတက်ရင်း ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီး သင်းသင်းမင်းရှိရာအရပ်သို့ အပြောင်းလျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လဲ့လဲ့က တင့်ဆွေကို စိတ်ဝင်စားနေမှန်းသိသဖြင့် သင်းသင်းမင်းနဲ့တိုင်ပင်ကာ တလှာ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြောရလျှင် လဲ့လဲ့ကား သက်သက်ချိုနှင့် ညီအမအရင်းလို ချစ်ခဲ့သော အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ။ လဲ့လဲ့မိဘတွေနှင့် တင့်ဆွေမိဘများကား ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ရပ်တည်းသားတွေ။ ဒါကို တင့်ဆွေက သိသဖြင့် သက်သက်ချိုစိတ်နဲ့လေနေသော သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို
ကယ်တင်ရှင်ကြီးလုပ်ကာ ဖူးစာရေးနတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ တင့်ဆွေနှင့်လဲ့လဲ့ ဖြစ်သွားသည့်ညက သူနှင့် သင်းသင်းမင်းကမြို့ကတည်းခိုခန်း
တစ်ခုမှာနှပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ချက်ကြီးနှင့် ကိုမောင်ငယ်ကိုဘေးတီးပေးဖို့ အကူအညီတောင်းရသေးသည်။ အချိန်ကိုက် ထောင်ဖမ်းလိုက်တော့ တင့်ဆွေနဲ့လဲ့လဲ့ကား ယခုလို ချစ်ကြိုက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်သည်အထိ ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျော်သူအောင်ကပြုံးလိုက်သည်။ သင်းသင်းမင်းက… သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာမှီနေရင်း….
“အခုလောက်ဆို တင့်ဆွေကြီးတစ်ယောက်တော့ အတိတ်မေ့နေလောက်ပြီ… သင်း..သူငယ်ချင်း အပြုအစုကောင်းတာနဲ့..”
“အဟိ..ကိုကဘာပြောလို့လည်းလို့…. သင်းသင်းဘာသာ စိတ်ကူးထဲရှိတာ တွေးနေတာကိုး…”
သင်းသင်းမင်းက ကျော်သူအောင်ရင်အုပ်ကြီးကို ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး လက်သီးဆုပ်လေးများနဲ့ ထုနေပါတယ်။ ကျော်သူအောင်က သင်းသင်းမင်း လက်ကလေးကို ဖမ်းဆုပ်ပြီး သူမကိုယ်လုံးလေးကို
သူ့ရင်ခွင်ထဲ ထည့်လိုက်ပြီး ပါးနှစ်ဖက်ကို နမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့..
ဆိုတဲ့ သင်းသင်းမင်းရဲ့အသံလေးက ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်နေကြသလိုဘဲ… သူငယ်ချင်း တင့်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့ လဲ့လဲ့နဲ့တွေ့ပြီး
ကြည်ဖြူကိုရော သက်သက်ချိုကိုရော အခုအချိန်မှာ သတိရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျော်သူအောင် စဉ်းစားမိလိုက်ပါသေးတယ်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာတော့ သင်းသင်းမင်းက မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ငြိမ်သက်လို့……..။